Kuporeswa Nekubata Nguo yaJesu | Upenyu hwaJesu
MATEU 9:18-22 MAKO 5:21-34 RUKA 8:40-48
MUMWE MUKADZI ANOPORESWA NEKUBATA NGUO YAJESU
Mashoko ekudzoka kwaJesu kuDhekaporisi apararira muvaJudha vari kugara kuchamhembe kwakadziva kumavirira kweGungwa reGarireya. Vakawanda vangave vakanzwa kuti pakaitika dutu, Jesu akaridzikamisa, uye vamwe vangangove vachizivawo kuti aporesa murume anga akagarwa nedhimoni. Saka “boka guru revanhu” rinoungana pedyo negungwa, zvichida muKapenaume, kuti vatambire Jesu. (Mako 5:21) Achingotsika pamhenderekedzo, vanobva varatidza kuti vane chido chekunzwa nezvake uye kumuona.
Mumwe wevanhu vane shungu dzokuona Jesu ndiJairosi, mumwe wevakuru vanotungamirira sinagogi, zvichida yemuKapenaume. Anogwadamira Jesu omuteterera achiti: “Mwanasikana wangu muduku arwara kwazvo. Ndapota mungauya here muise maoko enyu paari kuti apore, ararame.” (Mako 5:23) Jesu achaita sei nechikumbiro chaJairosi chokubatsira mwanasikana wake mumwe chete waanoda zvikuru ane makore 12?—Ruka 8:42.
Ari munzira kuenda kumba kwaJairosi, Jesu anosangana zvekare nemamwe mamiriro ezvinhu anosiririsa. Vanhu vakawanda vari kufamba naJesu vari kufara, vachingoti dai Jesu avaitira chimwe chishamiso. Asi pakati pavo pane mumwe mukadzi ari kunyanya kufunga nezvechirwere chake chiri kumutambudza.
Mukadzi uyu wechiJudha ava nemakore 12 achitambudzwa nechirwere chekubuda ropa. Aedza kurapwa navanachiremba vakasiyana-siyana, achishandisa mari yake yose achitevedzera zvavanomuudza. Asi hazvisi kushanda. Zviripo ndezvokuti ‘ava kutonyanyisa kurwara.’—Mako 5:26.
Unogona kunzwisisa kuti urwere hwake hunomupedza simba uye hunonyadzisa. Chirwere chakadai chinowanzonyadzisa kutaura nezvacho pane vanhu. Uye maererano neMutemo waMosesi, kubuda ropa kunoita kuti mukadzi anzi haana kuchena. Munhu wose anomubata kana kuti anobata nguo dzake dzine ropa anofanira kugeza ova asina kuchena kusvikira manheru.—Revhitiko 15:25-27.
Mukadzi uyu akanzwa “zvinhu zvaitaurwa nezvaJesu,” uye nhasi azomutsvaka akamuwana. Nemhaka yekusachena kwake anopinda nemukati mevanhu achiita zvekuverevedza, achizviudza kuti: “Kana ndikangobata nguo yake yokunze ndichapora.” Paanongobata mupendero wenguo yaJesu, anonzwa kuti ropa ranga richibuda ramira! “Aporeswa chirwere chinotambudza.”—Mako 5:27-29.
Jesu anobva ati: “Ndiani andibata?” Unofunga kuti mukadzi uyu anonzwa sei nemashoko iwayo? Petro anopindura achiita seava kutotsiura Jesu achiti: “Murayiridzi, mapoka evanhu ari kukuunganirai achikumomoterai.” Saka sei Jesu ari kuti, “Ndiani andibata?” Jesu anotsanangura achiti: “Mumwe munhu andibata, nokuti ndanzwa kuti simba rabuda mandiri.” (Ruka 8:45, 46) Kureva kuti kuporeswa kwaitwa mukadzi uyu kwaita kuti simba raJesu ribude.
Achiona kuti zvaaita zvazivikanwa, mukadzi wacho anogwadamira Jesu achitya uye achidedera. Anobva adura vanhu vose vachinzwa nezvekurwara kwake uye kuporeswa kwaachangobva kuitwa. Jesu anomunyaradza nemutsa achiti: “Mwanasikana, kutenda kwako kwakuporesa. Enda norugare, uve noutano hwakanaka pachirwere chako chinotambudza.”—Mako 5:34.
Zviri pachena kuti munhu akasarudzwa naMwari kuti atonge nyika, ane rudo netsiye nyoro, uye ane simba rekubatsira vanhu!
Nei vanhu vaungana kuti vatambire Jesu paadzoka muKapenaume?
Mumwe mukadzi ane dambudziko rei, uye chii chazoita kuti asvike pakutsvaka Jesu?
Mukadzi wacho anoporeswa sei, uye anonyaradzwa sei naJesu?
Zvinhu zvitatu zviri murudo rwaJesu zvinoratidza zvakakwana rudo rwaJehovha.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kuporeswa Nekubata Nguo yaJesu